ခရီးသည်၏ လွင့်မျောခြင်း: November 2008
အမြင်ချို့က ဘ၀မကျဗေမဲ့၊ အသွင်ရယ်က အစဉ်ထူးသာမို့၊
ရင်ထဲလှစ်ပြ ဖွင့်ဟချင်လို့၊ အများတကာ ရင်ဝယ်မကျလဲ၊
အရှိမဆိတ် ရေငုံနှုတ်ပိတ်၊ ဆန်း၍သာမြင် မှန်မပြောရင်၊
အနှစ်ဆယ်မက အနှစ်တရာရ၊ ဘေးမသွယ်ပဲ ခုတ်မောင်းနေဆဲ၊
အမြင်ရယ်ကို လှစ်ပြချင်သမို့၊ အဆင်ရယ်က ပါတိတ်ရောင်ဖြင့်၊
ရှုပ်ကာပွေလီ စုတ်ကာချည်ထဲ၊ တိုက်နေတိုက်ကွဲ တော်လှန်နေမြဲ၊
စိတ်အလျင်က မြစ်ကျိုးအတွင်း၊ ရေပုတ်သိုးလို အတ္တအားများ၊
အရောင်ချယ်ရင်း ကွေးသူများ၏ တမ်းချင်းတခုပေါ့…
ဗမာ့ စက်မှုတော်လှန်ရေးကို စတင်ခဲ့သည့် မင်းတုန်းမင်း၏ လက်ထက်တွင် မန္တလေး နေပြည်တော်သည် ရှေးထုံးများစွာ ရိုးရာမပျက် သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေသည်။ သို့သော် မင်းတုန်းမင်းသည် ရိုးစွဲနေသည့် ဓလေ့များတွင် မွေ့လျော် နှက်သက်သော စိတ်ဓါတ် မရှိပေ။ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ပထမစစ်အပြီးတွင် ဗမာတို့၏ တံခါးပိတ်ဘုရင်စနစ်သည် ယုန်နှင့် လိပ် ပြေးပြိုင်ပွဲ၌ နိုးတ၀က်ဖြင့် လန့်နိုးလာသည့် ယုန်၏ စိတ်သဏ္ဍာန်လို မင်းတုန်းမင်းနှင့် ၎င်း၏ အပေါင်းအပါများ သဘောပေါက် သိမြင်လာသည်။ ထိုစစ်ပွဲအပြီး ဗမာ့ အာဏာပိုင်များသည် အိမ်ပြင် ကမ္ဘာတွင် မည်မျှလောက် တိုးတက်နေသည်ကို သိမြင်လာ၏။ ကနောင်မင်းသား ယောမင်းကြီး ဦးဖိုးလှိုင် နှင့် ကင်းဝန်မင်းကြီး မောင်ကောင်းတို့သည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင် ထင်ရှား၏။ နောက်ပြီး မင်းတုန်းမင်းက ပြည်သူ ပြည်သား များအတွက် လိုအပ်ချက်များ တောင်းဆိုရန်အတွက် ဟစ်တိုင် တခု လုပ်ပေးထားသည်။ ထို ဟစ်တိုင်သည် ဗြဲတိုက်အနီးတွင် ရှိ၏။
မင်းတုန်းမင်း၏ ထူးခြားချက်ကား ခေတ်နှင့်အမှီ တိုးတက်စေရန်အတွက် သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်၏ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်သော လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့်၏ အပိုင်းအစအဖြစ် ပထမဦးဆုံးသော ရတနာပုံ နေပြည်တော် သတင်းစာကို ၁၂၃၆ခုနှစ်တွင် မင်း၏ အကူအညီဖြင့် တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သည်။
မင်းတုန်းမင်း၏ မှတ်သားလောက်ဖွယ် စကားက “ ငါမကောင်း ငါ့ရေး၊ မိဖုရားကြီး မကောင်း မိဖုရားကြီးရေး” ဟူ၍ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်ကို ပေးခဲ့၏။ ( ဆရာဇေယျ )
သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်တောင်မှ သူ့မကောင်းလျှင် သူအကြောင်း ရေးခွင့်ပေး ပြောခွင်ပေးသည်မှာ အားကျ လောက်ပါ၏။
မကောင်းတာကို ရေးချပြရင် အပြစ်တခု ဖြစ်နေလော..
အနာတခုကို ဆေးပေးသလို ဆန္ဒဖြင့် ပြောသည်ကို လက်မခံနိုင်သလော..
ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများကို ထောက်ပြ ဝေဖန်ခြင်းသည် မှားလော..
သို့လော သို့လောများက ခေါင်းခဲစရာပါပဲ…
“ မကြိုက်တဲ့ဟာတွေကို ငြင်းပယ်ဖို့ သတ္တိရှိကြပြီး၊
အမှန်ကို မလုပ်ရဲရင်တောင်မှ အမှားတွေကို မထောက်ခံကြဖို့ ”…(ဇေယျာသော်)
အငံဓါတ်များနေသည် ဟင်းတခွက်ကို ဆားထပ်ထည့်ပေးရမည်ဆိုရင်တော့ ကောင်းမွန်သော ဟင်းလျာတခု ဖြစ်လာမည်မဟုတ်၊ အငံများနေသည်ကို ရေထည့်ပြီး အစပ်အဟတ်တည့်အောင် ပြုပြင်မွန်းမံမှသာလျှင် ဟင်းကောင်းတခွက် ရရှိနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် စစ်တုရင် ကစားပွဲအတွင်း လူတယောက် ဖြစ်နေလျှင် ကစားပွဲ အပြင်စည်းက စစ်တုရင်ပညာ တတ်မြောက်သည့် သူတယောက် ကြည့်ရှု့နေသည် ဆိုပါစို့..
သင့်ထက် အပြင်စည်းဝိုင်းက ကြည့်ရှု့သောသူသည် သင်မမြင်နိုင်သည့် တိုက်ကွက်များကို မြင်နိုင်လိမ့်မည် ထင်၏။
ကြည့်ရှု့နေသောသူ၏ အကြည့်သည် သင်အတွက်လား ဒါမဟုတ် သင့်၏ ပြိုင်ဖက်အတွက်လား..
ဤသည်ကို သင် မြင်တတ်ဖို့ လိုအပ်မည်။
မဟုတ်သည်ကို ဟုတ်ပါသည်ဟု ဘောင်းတော်ညိတ် စိတ်တော်သိ ပုံစံ လုပ်လျှင် မိမိ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ကျဆုံးမည် မလွဲပါ။ သူက ငါ့၏ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည့်အတွက်၊ သူတို့က ကိုယ့်ဖက်သားများ ဖြစ်သည့်အတွက်ဆိုသည့် ဘက်လိုက်ပြီး အလိုလိုက် အကြိုက်တွေ ပြောနေလျှင် သင်သည် သူ့လူ ကိုယ့်ဖက်သားနှင့် အဆင့်အတန်း တူတူလောက် ဖြစ်နေမည်။
မှတ်ချက်။ ။ ယနေ့ မြန်မာပြည်အတွင်း ၎င်းအခွင့်အရေးများ မရနိုင်ပါ၊ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲအား အကြည်အညိုပျက်စေသော ပုဒ်ထီး ပုဒ်မများဖြင့် နှစ်ပါးသွား နေရလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါ့မလား မောင်ကာလူးကို ဥပမေရဖြင့် ကြည့်ရှု့ မြင်နိုင်ပါသည်။ တခြားသော သာဓကများစွာပြီး ရေးရမည်ဆိုလျှင် တထောင့်တည ပုံပြင်ထက်တောင် ရှည်လျား ထွေပြား သွားလိမ့်မည်။
“ ခက်ပဲခက်သကွာ၊ ရှက်လဲရှက်စရာ၊ လက်ဝဲလင်္ကျာ အဖြူအနီ၊ လူတရှင်းတို့ကြောင့်..
သြော်.. တမိသားချင်းတွေတောင် သတိတရားကင်းကင်းပြီး၊ အချင်းချင်းပင် မညီမညွှတ်မူ၍၊ ပြည်ကျွတ်အောင် အမြီးတထောင်ထောင်နှင့် တညီးညီး တပြောင်ပြောင် မီးလောင်တိုက်သွင်းချိန်မို့၊ ချင်းတွင်း ကျေးအညာတခိုက၊ ကလေးရာဇဂြိုဟ်ကိုတောင်၊ တွေးကား အလိုလို လွမ်းမိတဲ့ပြင်၊ မစွမ်းနိုင် မသာမယာ ဒုက္ခဖြင့်….( သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း)
အထူးသဖြင့် မြန်မာလူမျိုးတို့သည် မူအပေါ်ရော လူပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်တွင် ကွဲလွဲနေကြပါသည်။ ကွဲလွဲမှုမှတဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မုန်းတီးမှုများ ပေါ်ပေါက်လာရ၍ ရည်မှန်းချက် လမ်းစများ ပျောက်ဆုံးနေသည်မှာ ခေတ်အဆက်ဆက်က စကားပြောခဲ့သည်။ ရှုပ်ထွေးနေသည့် ပြသာနာတခုကို အဖြေတခု ရရန်အတွက် ဝေဖန်ကွဲလွဲပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်က ကောင်း၏။ တလောတုန်းက ကုလသမဂ္ဂတွင် စစ်အစိုးရအား တရားမ၀င် အစိုးရဟု အဆိုတခု တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ သို့ဗေမဲ့ တချို့သော နိုင်ငံရေးကို လုပ်နေသူများက ပါဝင် ထောက်ခံခြင်းမရှိသဖြင့် ပြသာနာများစွာ ကြုံတွေ့ရပြီး ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် မရောက်ပဲ ကိုယ့်အချင်းချင်းပဲ သဘောထား ကွဲလွဲခဲ့ရပါသည်။ ဘာဇာကြောင့် ပါဝင်ပူးပေါင်းခြင်း မသိရသောလည်း တိုက်ဖေါ်အတွင်း အဖုအထက်များတော့ ရှိသွားပါ၏။ နောက်ဆုံး ရလဒ်က ရန်သူ့ကို တိုက်ခိုက်သည်ထက် မိမိတို့အတွင်း စည်းပြေ ၀ါးပြေ ဖြစ်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ရှိဖြစ်မှသာလျှင် အောင်မြင်သော လမ်းကြောင်းအပေါ် ရပ်တည်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုခေါင်းဆောင်ကောင်း၏ အနောက်တွင် ကျွန်ုပ်သည် နောက်လိုက်ကောင်းတယောက် ရပ်တည်သွားမည် ဖြစ်၏။
အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကရက်ပါတီ၌ သမ္မတလောင်း ရွေးချယ်စဉ်က ပြိုင်ဖက်နှစ်ဦးသည် ရှိသမျှ အပုတ်၊ ဖြစ်ခဲ့သမျှ အဟုတ်တွေကို နင်ပဲငဆ ပြောရုံတမည် သမ္မတလောင်း ဖြစ်ရေးအတွက် အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွင် ထိုကဲ့သို့ ပြောဆိုပြီးသကာလ တယောက်မျက်နှာ တယောက်မကြည့်လောက်အောင် ဖြစ်သွားမည်။ နင်လား ငါ့ကို ဒီလို တိုက်ခိုက် ပြောဆိုတယ်ဆိုပြီး ကာယကံရှင် နှစ်ဦးမကပဲ ဆွေဆက်မျိုးဆက် ၇ ဆက်လုံး မဆက်ဆံနိုင်အောင် အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားမှာ သေချာသည်။
အမေရိကန်လူမျိုးတို့ သဘောထားကြီးပုံက တခုချင်းထက် တဖွဲ့လုံး အကျိုးစီးပွားကိုသာ ကြည့်ရှု့ပြီး အိုဘာမား သမ္မတ ဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက် ဒီမိုကရက် သမ္မတဟောင်း ကလင်တန်ရော၊ အိုဘာမား၏ ပြိုင်ဖက်ဖြစ်သည့် မစ္စ ကလင်တန်ကပါ ၎င်းကို ထောက်ပံအားပေးခဲ့သည်။ ဘယ်လောက် အားကျ လေးစားစရာကောင်းသလဲ စိတ်ထားမြင့်မြတ်ပုံများ...
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးဆို သွားစမ်းပါ ဒီငမဲ ငါ့ကို နိပ်ကွပ်ထားတယ် နင့်ဟာနင် ဘာကြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဂရုမစိုက်တော့ဘူး ဆိုပြီး လှည့်တောင် မကြည့်မှာ သေချာ၏။
အိုဘားမားကလည်း သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပြီးနောက် မစ္စ ကလင်တန်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ မူဝါဒအရ တတိယ အမြင့်ဆုံး အာဏာပိုင်ဖြစ်သည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ရည်ရွယ်ထားလိုက်၏။ အပြန်အလှန် သဘောထားကြီးမှု သင်္ကေတတခု ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ မောင်ကလင်တန်ကို “ နိုင်ငံရေးတွေင် မည်ကဲ့သို့ သဘောထားကြီးနည်း ”သင်ခန်းစာတခု သင်ခိုင်းရလိုလို ဖြစ်နေပြီ၊ ကလက်တန်ကို ဆရာခန့်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ သင်ကြားလိုက်ရင် သိပ်ကောင်းသွားမှာပဲလို့ တွေးကြည့်တာပါ၊ နီးနီးနားနား ခေါင်းဆောင်များ ဦးစွာ သင်ကြားပြီးရင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်ပွား သင်တန်း လာပို့ချလှည့်ပါ။
စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်း ပြယုဂ်တခု ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာသင်ယူရဦးမည်။
Posted by လူလ at Sunday, November 30, 20083comments:
အိုး ဘာတဲ့.. ရှာလကာ မဆလာ လာပါပြီ အသာတကြည် ဘာမထီ အဖြာတွေးများစွာ Tag ယဉ်ကျေးမှုထဲ တတွေ့ ရှောင်နေကာမှဖြင့် ပထမတွေ ဒုတိယတွေ ၊ သေခါနီး နောက်ဆုံးရက်တွေ၊ မွေးခါနီး ဆယ်ရက်လိုတွေ မကြိုက်ဆုံးတွေ အမုန်းဆုံးတွေ အစုံစုံ အဖုံဖုံ ရောင်တော် ပြန်နေကြတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ရှောင်လင်ကျောင်းတော်မှ အရှောင်သိုင်းသမား လီရှောင်ကွေ့ ကတောင် အဖိုး ခေါ်ရလောက်အောင် ကွေ့ပတ်နေတာလဲမရ၊ အမောင်လူလ အလှည့်ကို ဘာမလိုလိုရော ဘာလိုလိုပါ ဗုံဆိုင်းမပါ ရာဇမတ်မကာ သဲဖြူမဖြန်းပဲ ဆိုက်ရောက်လာ၏။
အသင်တို့ ဘလောဂ်လောကထဲမှာ စီးမျောနေတယ်ဆိုတော့လဲ အလိုက်သင့် မောင်ဘဦး ထုံး နှလုံး မူရမှာပေါ့နော်။ မရေးပြန်သော်လည်း ဘေးထိုင် ဘုပြောနေတယ်ဆိုပြီး ပြောခံရဦးမယ်။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ မြန်မာစာ စာစီစာရိုက်ကို လုပ်စားလာခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့လည်း ဒါလေးများ အထာဖြင့် တွေ့ကရာ ရှစ်သောင်းမက ကိုးသောင်း တသိန်းလဲ ရှာကြံပြီး ရေးနိုင်ပေါ့ ဟဲဟဲ၊ ရိုးသားစွာ ၀န်ခံရရင် ထိုမဟာ Tag ယဉ်ကျေးမှုကို စိတ်ထဲမှာ ဖီလင်မလာတာတော့ အမှန်ပဲ။ အညမည သဘောအရ အိမ်နောက် အပူ၊ အိမ်အရှေ့ မချမ်းသာ ဆိုသလို စီးမျော ပေးရမှာပေါ့လေ။ ကိုယ်လဲလေ ဘလောဂ်ဂါသားဗေမို့…
တလောတုန်းက ကိုဟ၏ သေခါနည်း ဆယ်ရက်အလို Tag ကို ဖတ်ရှု့ပြီး သကာလ သွား နောက် လိုက်သေးတယ်။ ကိုဟကြီးက တကယ့် ဖီလင်အပြည့်နှင့် ၁၀ ရက်ကနေ ၉.၈.၇ နေ့အစဉ်လိုက် ရေးချနေလိုက်တာ နောက်ဆုံး တစ်ရက် ရောက်ခါနည်း သူ၏ စီဘောက်မှာ “ ကျွန်နော်မှာ ပြုခဲ့တဲ့ ရှိသမျှ လက်ကျန် ကုသိုလ်လေးတွေ စဉ်းစားပြီး ကိုဟ ရေ အမျှ အမျှ အမျှ ” ဆိုပြီး သွား စ လိုက်သေးတယ်။ အောက်စဖို့က မနန္ဒာတောင် ကိုလူလရေးထားတဲ့ ကိုဟကြီး၏ စီဘောက်မှ စာကို ဖတ်ပြီး ထိုင်ရီလိုက်တယ်လို့ကျွန်နော် စီဘောက်မှာ လာအော် သွားသေးတယ်။ ကိုဟကြီးက စိတ်မဆိုးတတ်ဘူး စိတ်ကောင်းတယ် ဟဲဟဲ ချောတီးဗျာ ကျေးဇူး ကိုဟ။
ဟဲ့ လူလ၊ မြန်မာစာ ရိုက်တတ်တိုင်း ဘာတွေ လျှာရှည်နေတာလဲ၊ ခေါင်းစဉ်လဲ ပြန်ကြည့်ဦး ကာတွန်းကို ရေးခိုင်းတာကို ကြံရည်ဆိုင်က အကြိမ်ဖန်များစွာ ကြိတ်ပြီး လွင့်ပစ်ထားတဲ့ ကြံဖတ်လို အရည်မရ အဖတ်မရ ရေးနေတာတုန်း၊
ရေးခိုင်းတာက အကြိုက်ဆုံး ကာတွန်း၊ ရေးလိုက်တာက သူများ ကာတွန်းကား ၀ယ်ဖို့ ရှက်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို သူ့ ခံစားချက်နဲ့ သူ ရေးတတ်သလို ရေးတာ၊ ရွာသူကတောင် အရှုံး ပေးရတယ်ကွာ။ ရှက်စရာလားလေး ဘာလေး ညာလေးနှင့် ဟိုကားဝယ်မှ ရှက်ရတယ် ဘာညာ သဓကာတွေ လိုက်ဖွနေတာ ငဖွကြီး ကျနေတာပဲ၊ သူဟာသူ ဘာရေးရေးပေါ့ ကြွားတာလဲမဟုတ် လိမ်တာလဲမဟုတ် သူများဟာ ခိုးချတာလဲ မဟုတ်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးတာ သူများကိုလဲ ထိခိုက်ပေးတာ မဟုတ်ပဲ၊ ပါရမီကားလို ဆရာကြီး အထာနဲ့ကြားကားဝင်ဆွဲစရာလား ငပွကြီး ယောက်ဖရဲ့ .. လေပါတယ်။
အလကားရတဲ့ ဘလောဂ်မှာ သူတပါးကို မထိခိုက်ပဲ၊ ကိုယ် သန်ရာ မာရာကို ရေးနေတာပဲ၊ ရေးတဲ့ အကြောင်းကလည်း သူ့ ဆွေမျိုး ၇ ဆက်လုံး ခေါင်းပေါ် တင်ထားသလိုလို၊ ဒီလူ့ မျိုး မောင်သန်းရွှေ နေရာသာ ရရင်တော့ ဗမာပြည်ကြီး ငါးပါးမက မှောက်ဦးမှာပဲ မြင်ယောင်မိတယ်။
ဒီလူ့ ဆိုလို ပြောပြဦးမယ်၊ သက်ကြီးစကား သက်ငယ် မှတ်သားဆိုသလို ကြားဖူးနားဝပေါ့ဗျာ ..
လူ မျိုးနွယ်မှာ လူ၊ လူ့၊ လူး ဆိုတဲ့ သုံးမျိုး ရှိတယ်တဲ့၊ လူလို သူလို မဟုတ်တဲ့ သူတွေက လူ့ နှင့် လူးပါပဲ၊ လူ့ဆိုတာ လူတွေအပေါ်မှာ အနိုင်ယူစိတ်နဲ့ သူများ ဦးနှောက်ကို ကွိုင် စားနေတဲ့သူတွေ ( ဦးနှောက်စားသည်) ပေါ့၊
သူ အနေ့ဖြင့် လူတယောက်ဖြစ်ရေးအတွက် သူများ ခံစားချက်တွေကို အတင်းအဖျဉ်းချပြီး လိုက်လုနေတာကို လူမျိုးနွယ်တခု၏ လူ့ အမျိုးအစား ဖြစ်၏။ ပြောရဲပါစ ရေးရဲပါစ၊ စစ်အစိုးရ မကောင်းကြောင်းတွေ..
ဘယ့်နှယ်ဗျ မောင်ကျော်ဆန်းတို့က မီဒီယာကို မီဒီယာဖြင့် တိုက်မယ်လို့ ကြိမ်းဝါးနေတဲ့အချိန်၊ အစီအစဉ်ရှိရှိ စီမံကိန်းရှိရှိနှင့် လုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်များမှာ..
ကိုယ်တို့ဖက်သားတွေက သူ့လူ ကိုယ့်လူမှန်းမသိ၊ အသစ်တက်လာတဲ့ ဘလောဂ်ဂါသစ်လေးတွေကိုဆိုရင် နိပ်ကွပ်လိုက်ပြီး ကိုယ့်အောက် ဆွဲသွင်းလိုက်မယ်၊ တလွဲများနေတဲ့ ဆရာကြီး အထာပေါ့ဗျ။ ဆရာကြီး လုပ်ချင်ရင် စုံမှနော်.. အဋ္ဌာရဿ ၁၈ရပ် နဲ့ မလုံလောက်သေးဘူး၊
သူများက ကိုယ်ထက် နည်းနည်းသာသွားရင် မနာလို ၀န်တိုဖြစ်၊ စိတ်ဓါတ်ကိုက အဟောင်းတန်းကိုပဲ ကြွပါတော့..
ရှင်ချင်တယ် ရှင်ချင်တယ် ( သေချင်တယ် စကား၏ ဆန့်ကျင်ဖက်)၊
ရာဟူးမှာတွေ့နေသော ဂျပန်က ကိုသာယာကြီး စကား ခဏ ငှားသုံး၏။
ဆရာလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘလောဂ်ဂါ အသစ်ကို တွေ့ရင် ဖတ်လိုက်ပေါ့။ သူ့ရဲ့ ခံစားချက်၊ သူ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ရေးသူ၏ စာအပေါ် လူတိုင်း မြန်မာစာ ဖတ်တတ်ရင် သိနိုင်တဲ့ ဥစ္စာ ၊
သြော် ဒီ ဘလောဂ်လေးက သူမူက မဆိုးပါဘူး၊ လိုအပ်တာကို အားပေး ကူညီလိုက်ရမှာပဲ၊ အတွေးများ တွေးစမ်းပါ၊ မာနတွေ ခဏ ချထားပါ၊
အရက်သမားချင်းအတူတူ ငါက ဟင်နီကယ်သောက်တယ်၊ ကော့ညစ် သောက်တယ်၊
သူကတော့ ချက်ကြီး သောက်တယ်၊ ဟိုကတော့ဖြင့် ဂရီးလေဘယ် သောက်တယ် ပုံစံ မလုပ်ပါနဲ့ အတ္တတွေများနေရင် လမ်းဘေးကို တချက် ဆင်းထားပါဦး နောက် ကားတွေ ကျော် တက် ရတာပေါ့..
လူးနှင့် လူ ကိုတော့ နောက်ကြုံမှပဲ ရှင်းပြတော့မယ်၊ လက်ညောင်းလို့ …
ဟဲ့ ကလူလ တော်တော်၊ မင့်ကို ရေးခိုင်းတာက မင့်အကြိုက်ဆုံး ကာတွန်းများ ရေးခိုင်းနေတာ
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပင်လယ်ကူး ကုန်တင်သင်္ဘောထဲ ကွန်တိန်နာတွေ ချသလို၊ ဘာလို့ သူများအတင်းကို ယောင်္ကျားတန်မဲ့ အစီအရီ လိုက်ချနေတာလဲ .. မှားပ၊
အင်း.. ဒီလူတွေမျိုး ရှိလို့ ကျွန်ုပ် မောင်လူလ အခုတလော အကြိုက်ဆုံးက The_Simpsons ကာတွန်းဇာတ်ကား ဖြစ်ပါ၏။
ကလူလဆီမှာ စောစောအချိန်ရယ်၊ ည သုံးနာရီ ပတ်ဝန်းကျင် တီဗွီက အခန်းဆက် ဇာတ်လမ်းတွဲ လာတယ်။ လူလ အလုပ်က ညနေ အလုပ်ဆိုတော့ အိပ်ယာအပေါ် ရောက်တဲ့အချိန်နှင့် ကွက်တိပဲ။
The_Simpsons ကာတွန်းကို ကြည့်ပြီး အိပ်ပျော်သွားတာ များတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ ပြောမဆုံးပေါင် တောလေးတောင်ပဲဗျ၊
လူ့ သဘော၊ လူသဘာဝကို ဖွဲ့နွဲထားတဲ့ သရော် သရွဲ့ ကာတွန်း ဇာတ်လမ်းဆိုတော့ အရမ်း အသက်ငယ်တဲ့သူတွေ ကြည့်တဲ့ ဂျယ်ရီနှင့် တွမ် ကာတွန်းကားလိုတော့ မဟုတ်။
ဇာတ်လမ်းအကြောင်းတော့ မပြောတော့ဘူး မသိရင်လည်း ရှာကြည့်ပေါ့နော်..
အဓိက သရုပ်ဆောင်တာက Homer_Simpson၊ Marge_Simpson၊ Maggie_Simpson၊ Bart_Simpson၊ Lisa_Simpson တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းဆက် ဇာတ်လမ်းစတိုင်း မိသားစု အားလုံး တီဗွီကို အပြေးအလွား ထိုင်ကြည့်တာဖြင့် စ ထားတယ်။
Homer က ဖခင်တယောက်ပေါ့၊ ခေါင်းမှာ ဆံပင် နှစ်ချောင်းပဲ ပေါက်ပြီး နားရွက် အပေါ် နထင်မှာ ဆံပင် လေးချောင်း ပေါက်တဲ့သူ။ ဒါလဲ အဖြူကောင်တွေ ထိပ်ပြောင် ကတုံးဖြစ်နေတာ သရော်မှု တခုပဲ။ သူက ပေါတောတော၊ စိတ်ကောင်းတယ်၊ နမော်နမဲ့နိုင်တယ်၊ မှန်တယ်ထင်တာကို လုပ်တယ်၊ ဒိုးနပ်မုန့်ကို ကြိုက်တယ်၊ Duff ဘီယာကို ကြိုက်တယ်၊ အစားကြီးတယ်၊
ရွာက ရွှေမန်း ကောက်ညှင်းပေါင်း နှင့် ထန်းရည် ကြိုက်သလိုပေါ့..
ပေါသာပေါပေမဲ့ အလုပ်အကိုင်က ညူးကလီးယား ဓါတ်ပေါင်းဖိုမှာ ကွန်တိုးရုံးခန်းဖြင့် အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူ တယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အချဉ်တော့မဟုတ် အချို အချို..
ဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးတဲ့သူတွေကလဲ အဓိက ဇာတ်ကောင်က နမော်နမဲ့နိုင်သော်လည်း အန္တရယ်ကြီးမားတဲ့ လုပ်ငန်းမှာ အသက်မွေးနေတဲ့ သူတယောက်အဖြစ်။ သေချာတာက သူ၏ ပေါတောတော နိုင်မှု၊ နမော်နမဲ့ နိုင်မှုတို့ကို ဖာထေးထားပြီး လူ့ သဘာဝအရ အမှားတွေ၊ လူအသိုင်းအ၀ိုင်း တလွဲတွေကို သရော်တဲ့သူ၊ အရွဲ့တိုက်တဲ့ သူတယောက်အဖြစ် ဖန်တီးထားတယ်။
Marge ၊ သူ့ရဲ့ စတိုင် ဆံပင် ယောင်ထုံးကြီးက အခု နာမည်ကြီးနေတဲ့ အဆိုတော် မိန်းကလေး အေမီ ၀ှိုက်ဟောက် ဆံပင် စတိုင်လိုလို။ Margeက အေမီထက် ပေါ်ဦးတယ်၊ အေမီလည်း Margeကို အားကျနေသူ ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ပါ၏၊
သူက ထူးထူးထွေထွေ မရှိပါဘူး။ ပုံမှန် မိသားစုကို ဦးဆောင်နေတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မ ကောင်းတယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတယ်။ ဒါဗေမဲ့ အသွင်တူလို့ အိမ်သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို ဖန်တီးတဲ့သူတွေက ချယ်မှုန်းထားပါတယ်။
Bart က လူလတ်တန်းစားအနွယ်က ဖွားလာတဲ့ ငရှုတ် ငပြောင်လေးပေါ့၊ တီဗွီ ဂိမ်း ဆော့ မယ်၊ အတန်းဖေါ် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ သူကတော့ မဟုတ်တာ လုပ်မယ်ဆိုရင် အရှေ့ဆုံးက ပါတယ်။
Lisa ကတော့ ကော့နက်ကြီး မှုတ်မယ်၊ Bart အနိုင်ကျင့်တာ ခံရမယ်၊ သူလဲ ခေသူမဟုတ် လုပ်ချလိုက်ရင် တကယ့် ဟဲဗီးကြီးတွေပဲ၊ ပုံစံက ကြီးလာရင် အမေရိကန် သမ္မတတောင် တက်လုပ်မဲ့သူ။
Maggie က ကလေး ဆိုတော့လည်း ဇာတ်ညွန်းရေးတဲ့သူတွေက စကားပြောခွင့် မပေးပါဘူး၊ ချိုလိမ်ပဲ စုတ်နေရတဲ့ ဘ၀။ သူ .. တင်းလာပြီဆိုရင် ချိုလိမ် စုတ်တာ ပုံမှန် မဟုတ်တော့ဘူး၊ ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် တော်တော် မြန်လာတယ်။
ဇာတ်ကို ရံထားတဲ့ တခြား ဇာတ်ကောင်တွေက အများကြီးပါပဲ၊
သိချင်ရင်တော့၊ အောက်မှာ ရှိတဲ့ လခ့်မှာပဲ ကြည့်တော့ဗျို့  ..
http://www.watchthesimpsonsonline.com/ အင်္ဂလိပ် စကားပြောတော့ မဟုတ်တန်ရာ၊
အခုလို အကြိုက်ဆုံးကို The_Simpsons အဖြစ် ရွေးချယ်ရေးနေတာကတော့ ကြော်ငြာခ ရလို့ဗျ…..
Posted by လူလ at Friday, November 28, 20082comments:
မှတ်ချက်။ ။ ကိုဇာဂနာ၏ I သုံးလုံး စကားတခွန်း ဖြစ်သည်။ လူလ အတွေးဖြန့်ပြီး၊ ချစ်ရင်ထူး ( လူငယ်ဒိုင်ယာရီ) က ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ကူညီပေးသည်။
ကိုဇာဂနာအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် တင်ပြခြင်းတခု ဖြစ်သည်။
Posted by လူလ at Saturday, November 22, 20085comments:
ကျုပ်လက်များက ပေးဆပ်ခဲ့သူတွေရဲ့ အလောင်းကို မြုတ်နှံဖူးတယ်
ကျုပ် မျက်လုံးမှာ ပေးဆပ်သူအတွက် မျက်ရည်တွဲခိုဖူးတယ်
ကျုပ် ဦးနှောက်မှာ ပေးဆပ်ခဲ့သူတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာ စွဲမြဲနေတယ်
ကျုပ် အိပ်မက်မှာ ပေးဆပ်သူတွေကို တခါတလ မြင်မက်တယ်
ကျုပ် စိတ်သဏ္ဍာန်က ပေးဆပ်သူတွေအတွက် ရှိနေတယ်..
ပေးဆပ်ခဲ့သူတွေကို ကျုပ်ပေးချင်တာက ရုပ်ဝတ္တုမဟုတ်
ဖောက်ပြန်နေသူတွေကို ကျုပ်လက်ပေါ်က စာသားဖြင့် ထိုးနှက်တိုက်ချင်တယ်
ပေးဆပ်သူများ ကျုပ်လက်များက ခင်ဗျားတို့ရဲ အလောင်းကို မြုတ်ခဲ့သလို
ခင်ဗျားတို့၏ ပေးဆပ်ခဲ့တာ မတန်လွန်းလို့ ကျုပ် စာရေးနေတယ်
ကျုပ် ပညာတတ်လွန်းလို့ စာရေးနေတာ မဟုတ်ဘူး
ပေးဆပ်သူရေ ခင်ဗျားတို့အတွက် ယူကြုံးမရ ဖြစ်လွန်းလို့ပါ..
ခင်ဗျားတို့နှင့် ကျုပ်တို့အတူ အသိုင်းအ၀ိုင်းကွဲ အငတ်အပြတ်
မိုးလေဆောင်းဒဏ် ကြံကြံခံပြီး တိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်
ဒီမိုကရေစီ ထိုင်ယူတဲ့သူ နိုင်ငံအရေး ဘူဇွါတွေက
ဇက်ရက်မင်းလို စည်းစိမ်များနှင့် ယူတဲ့အချိန်ပေါ့
ပေးဆပ်သူ ခင်ဗျား သေတွင်းက ထကြည့်လိုက်ပါ
ခင်ဗျား သေရင်းနဲ့ ထိုင်ရယ်(ရီ) နေမယ်ဗျ ကျုပ် တပ်ပြောရဲတယ်
မင့် သေစောတယ်၊ တချို့ လူတွေလုပ်ပုံ သင့်သေခြင်းက မရေရာသလို
အနေချောင်ဖို့ မိုးလုံးလေထွား ဒီမိုတရားတွေ
ပြောပြတတ်တယ် သူတို့၊ ချွဲပြတတ်တယ် သူတို့၊
ဒါလေးများကွာ ရိုးနေပြီပေါ့ ပေးဆပ်သူရေ..
ဂဂျိုးဂဂျောင် နိုင်ငံရေး ဘူဇွါရှိသေး
ဒို့လူငယ်များ ဆိုကြလေ၀ယ် မပြုတ်ဝန်ကြီး ရှိမြဲပါပဲ
နဖူးထိပ်မှာ မွေးရာလို့ပါ သက်လုံစားမဲ့ ၀န်ကြီးအုပ်များ
ဘာမလုပ်တာ့ မရှုပ်ဖြစ်ပေါ့ ငါတို့ညံလို သူကိုမြဲစေ..
ဒီမိုတရား ဋီကာပွား၍ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘာမှမလုပ်
အချောင်တရားနဲ့ တကိုယ်ကောင်းဝါး ကယ်ပါမျိုးစား လက်မှတ်ကိုင်ပြီး
ထမင်းဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များက တသက်မရဘူး ဒီမိုကရေစီတဲ့..
အသက်စွန့်ပြီး ဘ၀စွန့်လွတ် ပြုနေသူတွေ ဖင်ယားသလို..
နိုင်ငံအရေး ပရောဟိတ်ကလဲ လုပ်သေးချင်ရဲ့
ညီညွတ်ဖွဲ့မှ ဒီမိုရမယ်တဲ့ သူပြောမှလား
ဗမာပြည်မှာ ညီညွတ်တာက ဘယ်အဖွဲ့များ ရှိခဲ့လို့လဲ
ပြောတဲ့သူက ဘာကိုမှလုပ် အချောင်စိတ်နဲ့
အပြောင်ရိတ်ပြီး ထမင်းမှန်တဲ့ ဘ၀တခုကို လုပ်ယူတဲ့သူ
အဆာခံတော့ သူတို့ကပဲ ဗမာပြည်ကြီးကို ကယ်တင်သလို
ပြန်ပို့ခံရရင် အကျဉ်းထောင်မှာ စံရမယ်တဲ့
ဒီလိုလူမျိုး ယောက်တရာထက် ကိုယ့်ဆန်ကျင်ဖက်
ရန်ဖက်တစ်ယောက်ကို လေးစားလိုက်ပါရဲ့ 
သြော် .. သခင်သန်းထွန်း မသိလို့ပေါ့
သန့်စဉ်ရေးလား ခေါင်းစဉ်တခုမှာ ပါသွားမယ့်လူတွေပဲ..
ပေးဆပ်သူရေ ခင်ဗျား စွန့်လွတ်မှုကို ရင်နာတယ်
ခင်ဗျားရဲ့ ပေးဆပ်မှု၏ ဈေးကွက်မှာ ဈေးပျက်အောင်
လုပ်တဲ့သူများနေလို့ ခင်ဗျားအတွက် ကျုပ် စာရေးနေတယ်…
မှတ်ချက်။ ။ လွန်ခဲ့သော နှစ်များက တောတွင်းတနေရာ၌ အတူတူတိုက်ရင်း လွင့်ကြွေသွားသည့် သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်သော ကိုအောင်နိုင်၊ ၀င်းမြင့်လေး၊ တ၀မ်းကွဲအကို ဖိုးတုတ်ကြီး၊ ကျောင်းနေဖက်များဖြစ်သော မြင့်ဇော်၊ အောင်ဆန်းနှင့် ABSDF တပ်ရင်း ( ၂၀၁ ) မှ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ရဲဘော် ရဲဘက်များကို သတိရခြင်းများစွာဖြင့် လွင့်မျောခြင်းတခု ဖြစ်သည်။
“ မည်သူ့ ကိုမျှ မရည်ရွယ်ပါ...
တိုက်ဆိုင်မှုရှိလျှင် ထိုသူတို့ကိုပင် ရည်ညွှန်းခြင်းစစ်စစ်
Posted by လူလ at Monday, November 17, 20089comments:
ဤကာတွန်းပုံက အီးမေးကနေ ရလိုက်တဲ့ ပုံလေးပေါ့။ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ပိုင်မှန်းမသိပါ။ ပိုင်သူထံ အခွင့်မတောင်းနိုင်တာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။
ထိုပုံရဲ့ သရုပ်ဖေါ်မှုကို ကြိုက်လို့ ဘလောင်္ဂမှာ တင်ထားခြင်း ဖြစ်တယ်။ ပန်းချီပုံထဲက ပုလိပ် ဦးထုပ်ကို ကြည့်ရတာ ပြင်သစ် ပုလိပ်နဲ့ အတူတူပဲ။ ဒီ ကာတွန်းက ပြင်သစ်က လာတယ်လို့ ယူဆရမည်။
Posted by လူလ at Thursday, November 13, 2008 No comments:
အံဥပဒေက ၆၅ နှစ်တဲ့
မှတ်ချက်။ ။ ဓါတ်ပုံကို Yahoo Images မှ imprison ကို ရိုက်ထည့်ပြီး ယူထားပါသည်။
Posted by လူလ at Wednesday, November 12, 20084comments:
Labels: လျှပ်တပြက် ခံစားမှု
ကျွန်ုပ် ရှာဖွေတွေ့ရှိသော မဟာယာန Vs ထေရ၀ါဒ
ဤပို့စ်ကို ရေးဖြစ်လိုက်သည်က နာမည်ရ ဘလောဂ်ဂါ တယောက်ဖြစ်သော မောင်သင်ကာ (ရှု့ရန်"http://mmthinker.iblogger.org/") ရေးထားသည်ကို ဖတ်ရှု့ပြီး သကာလ လက်လှမ်း နိုင်သော စာအုပ်များကို ရှာဖွေပြီး ကျွန်နော် နားလည်သလောက် တင်ပြခြင်းတခု ဖြစ်သည်။ ကျွန်နော်သည် မိရိုးဖလာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် တယောက် ဖြစ်၏။ ဘာသာရေးကို ရေးဖွဲ့မည်ဆိုလျှင် မိမိ သဘောထားများဖြင့် မရေးနိုင်ပါ။ ဘာသာတရားသည် မိမိ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့် အရာမဟုတ်သဖြင့် စာပေကျမ်းဂန်များကို မှီငြမ်းပြီးမှ သာလျှင် ရေးနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိ ဖြတ်သန်းမှုအတွင်း ဆရာတော် သံဃာတော် များ ပြောပြခဲ့သည့်ကို ကြားဖူးခဲ့သော ဗုဒ္ဒဘာသာအကြောင်း နှင့် လက်လှမ်းမီသော စာပေ ကျမ်းဂန်အလာများကို ရောသမျှပြီး တင်ပြမှုတခု ဖြစ်သည်။
မဟာဗုဒ္ဒနှင့် ခေတ်ပြိုင်ပေါ်သည့် ၀ါဒလေးမျိုးတွင်
လောကုတ္တရာ အကျိုးတရားဖြစ်သည့် သံသရာမှ လွတ်မြောက်ခြင်းကို ကျင့်ကြံသည့် သစ္စာလေးပါးတရား မတွေရပါ။
ထို့ကြောင့် မဟာဝီရသည် အတ္တ ရှု့ထောင့်မှ ကြည့်၍ အနတ္တ ရှု့ထောင့်ကို မကြည့်ပါ။
ကံဆိုသော အရာမရှိ၊ ဥာဏ်နှင့် ၀ိရိယသာ ရှိ၏။
ယခုခေတ် လူသားဝါဒနှင့် ဆင်သလိုလို ရှိ၏။
ဆိုသည့် ရှု့ထောင့် ငါးမျိုးကနေ ယုတ္တိပြသော ရောထွေးမှုဝါဒ ဆိုရမည်။
အကျင့်သီလနှင့် အကျင့်ပဋိပတ်ကို ယုံကြည့်သော သီလ၀ါဒတခု ဖြစ်သည်။
သီလကို ပန်းတိုင် ပြုသောကြောင့် သူတော်စဉ်ဝါဒ တခုဖြစ်သည်။
စကားစပ် မောင်မောင်ဇော်လတ် ရေးသားပြီး ထူးအိမ်သင်က မဟာဝီရ ဗုဒ္ဒ သီချင်းကို သီဆိုခဲ့ပါသည်။ တခုတောင်းပန်သည်က မြန်မာပြည် အဆိုတော် လောကတွင် ကျွန်နော် လေးစား နှက်သက်ပြီး ဗဟုသုတ ပြည့်စုံတဲ့ ပညာရှင်တယောက်ကို လက်ညိုး ထိုးပြရမည်ဆိုလျှင် ထူးအိမ်သင်မှတပါး တခြားသူမရှိပါ။ မောင်မောင်ဇော်လတ် ရေးသားသည့် သီချင်း စာသားများအရ မဟာဝီရ၀ါဒသည် ဗုဒ္ဒ၀ါဒမဟုတ်ပါ ခေတ်ပြိုင် ပေါ်ပေါက်လာသည့် ဆင်တူယိုးမှား ဖြစ်နေသော ၀ါဒ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသီချင်းကို အပေါ်စာပုဒ်ဖြင့် အမြင်မမှားအောင် ရှင်းချက်တခု ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓ၀ါဒအရ လောကတွင် သတ္တလောကသည် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ အနုလောမနည်းအရ သတ္တလောက ဖြစ်ပေါ်ပုံနှင့် ပဋိလောမနည်းအရ သတ္တလောက ချုပ်ငြိမ်းပုံ သဘောတရားရ မချုပ်ပျက်မည် ကာလအတွင်း အကြောင်းကြောင့် အကျိုးများဖြစ်ပြီး သံသရာကို လည်ပတ်နေရမည်။ အကြောင်းဆိုရာဝယ် လောဘ ဒေါသ မောဟ ဆိုသော တဏှာဖြင့်ယှဉ်ပြီး အခြေခံအကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အဆိုး အကောင်း အကျိုးတရားကို ရရှိ၏။ အကျယ်ကို ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအတွင် ကြည့်ပါ။
သတ္တ၀ါဟူသည် မြဲရှိနေသည့်အရာ မဟုတ်၊ သေလျှင် ပြီးပြတ်သွားသည်လည်း မဟုတ်၊ အတ္တအပေါ် အခြေခံပြီး ကံကို လက်ခံသောကြောင့် ထိုကံတရား၏ လွတ်မြောက်ရာ အနတ္တကို စမ်းသပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြုလုပ်သူပင် ကောင်းမှုအကျိုးနဲ့ မကောင်းမှုအကျိုးကို ခံစားရသည်။ ထိုအယူကား ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ခံသော အကျင့်အတခုဖြစ်သည်။
ဗြဟ္မာဏ၀ါဒနှင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် ကံ ကို ယုံကြည်ချင်း အတူတူ ဖြစ်သည်။ သို့သော် လောက၌ မြဲနေသော အရာတခု ရှိသည်ဟု ဗြဟ္မာဏ၀ါဒက လက်ခံ၏။ သမထကျင့်စဉ် လမ်းလိုက်ပြီး ဗြဟ္မာပြည်တွင် ဂိတ်ဆုံးနေသည်။ ဗြဟ္မာဘုံသည် သက်တမ်း ရှည်လျားသဖြင့် မြဲသည်ဟု ဗြဟ္မာဏ၀ါဒက လက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဒက ဗြဟ္မာပြည်မှ စုတေပြီး မစင်တွင်း၌ ၀က်ဖြစ်နေရသည် ဟု သတ္တလောကသည် မမြဲသောတရားတခု ထောင့်ပြ၏။ “ ဗြဟ္မာပြည် တဝင်းဝင်း ဝက်စားကျင်း တရှုံ့ရှုံ့ ” ဗမာ စကာပုံလည်း ရှိပါသေးသည်။
ဗုဒ္ဒစာပေသည် ဒဿနစာပေနှင့် ရောနှောသည့် အပိုင်းနှင့် မရောနှောသည့် အပိုင်းဟူ၍ ကွဲထွက်သွားသည်။ ဒဿနစာပေနှင့် ရောနှောသည့်အပိုင်းမှာ မဟာ ယာန အမည်ဖြင့် ထင်ရှားသည်။ တခြား ဒဿန စာပေများနှင့် အပြိုင် စည်းရုံးချင်သဖြင့် မူရင်း ပါဠိဘာသာမှ တက္ကတဘာသာသို့ ကူးပြောင်းပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် တည်ရှိခဲ့သည်။ ထိုမှတဆင့် အာရှ မြောင်ပိုင်းသို့ ရိုးရာဝါဒများ ဖြစ်သည့် တရုတ် ရှေးဟောင်း တာအိုဝါဒဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြီး မြောက်ပိုင်း မဟာ ယာန ထွန်းကားခဲ့သည်။ တိဘက် တရုတ် သို့ ရောက်ရှိသွားသော တက္ကတဘာသာသည် ရောက်ရှိရာ လူမျိုးဓလေ့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ရောနှောကာ ဒဿန စာပေအသွင် အမျိုးမျိုး ဆောင်သဖြင့် မူရင်း မဟာယာနနှင့် တရုတ် ဓလေ့နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး “ ဇင် ၀ါဒ ” ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ထိုဝါဒသည် ဂျပန်ကို ရောက်ရှိသွားသည့် မဟာယာန တမျိုးဖြစ်သည်။
ဇင် ၀ါဒ ဆိုသည်မှာ မိမိပြုခဲ့သည့် အတိတ်က ကြောင်းကို ပစ္စပ္ပုန်ကို မယူဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အေဒီ ၁၂ ရာစု ဂျပန်ပြည်တွင် ရှဲင်ရန် ရှုနင်ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်က သုခ၀တီဗုဒ္ဓ၀ါဒဖြစ်သော မယာယာနဂိုဏ်းကွဲကို အခြေခံပြီး သွတ်သွင်းခဲ့သည်။ သုခ၀တီဗုဒ္ဓ၀ါဒ ဆိုသည်မှာ အဆုံးမရှိသော စင်္ကြာဝင်္လအတွင်း တနေရာတွင် ဗုဒ္ဓဘုံ တခုရှိသည်။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသည် ကိုယ်တည်ပြ ရုပ်သဘာဝအရ ထိုဗုဒ္ဓဘုံ၌ တည်ရှိနေသည်ဟု ယုံကြည်သည်။
“ တနေ့သ၌ ရဟန်းနှစ်ပါးသည် လမ်းခရီးတခုကို ခရီးနှင်ကြသည်။ ရွာဇနပုဒ်အနီးသို့ ရောက်သောအခါ မိန်းကလေးတယောက်က ရေချောင်းကို ဖြတ်ကူးရန် အခက်အခဲ ကြုံနေရသည့်ကို တွေ့ရှိလိုက်သည်။ ထိုအခါ တပါးသော ရဟန်းတပါးက ကူညီ သင့်သည်ကို ထင်ပြီးပြီး မိန်းကလေးက ပွေ့ယူပြီး တဖက်ကမ်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ထိုနောက် ရဟန်းနှစ်ပါးသည် လိုအပ်သော ခရီးကို ဆက်လက် ထွက်ခွာခဲ့သည်။ အချိန် အနည်းအငယ် ကြာမြင့်သည့် လမ်းခုလပ်ကို ရောက်သောအခါ မကူညီခဲ့သည့် ရဟန်းက “ ငါ့ အရှင်.. သင် မိန်းကလေးအား ကူညီတုန်းက ပွေ့ဖက်တဲ့အချိန်မှာ မည်သည့် စိတ်ခံစားမှုကို ရရှိသနည်း ” ဟု စကား စ လိုက်၏။ ထိုအခါ ကူညီခဲ့သည့် ရဟန်းက “ ငါ့ အရှင်.. သင်သည် ထိုအရာကို အခုထိ တွေးတော နေပါသလား ” ဟု ပြန်လှည် မေးလိုက်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အကူအညီ ပေးလိုက်သော ရဟန်း၏ မေးခွန်းသည် ဇင် ၀ါဒ ၏ သဘောပင် ဖြစ်သည်။
ဇင်ဝါဒကို ခေတ်အဆက်ဆက် ပေါ်ပေါက်လာသော ထေရ၀ါဒ မထေရ်မြတ်များက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်မနိုင်အောင် အပြင်းအထန် တားဆီးကြသည်။ ကျောက်တွင်း အရေးနှင့် ထင်ရှားလာသည့် အရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ လူသေလူဖြစ် ၀ါဒသည် တာအိုဝါဒ ၊ ဇင်ဝါဒကို အခြေခံပြီး ယနေ့မြန်မာတို့ ကျင့်သုံးနေသည့် ထေရ၀ါဒနှင့် ရောသမှမွေထားသည့် ၀ါဒ တခုဖြစ်သည်။
ဇင် ၀ါဒနှင့် ဆင်တူသည့် ဗြဟ္မာဏ၀ါဒ ဂိုဏ်းအနွယ်ဖြစ်သော တန္တရယာန၊ မန္တရယာန အရည်းကြီးဝါဒသည် မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်းတွင် ထွန်းကားခဲ့သည်။ ထိုဝါဒသည် အာသံ ကသည်း မဏိပူရဖက်မှ ဆင်းသင့်လာသည့် မဟာယာန ဂိုဏ်းကွဲတခု ဖြစ်သည်။
အောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်တွင် လက်ခံသည့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒက သီရိလင်္ကာမှ သင်္ဘောဖြင့် ရောက်ရှိလာသည့် ၀ါဒဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗမာက လှိုင်းဖြင့် ရောက်လာသည့် ၀ါဒကို ကိုးကွယ်သဖြင့် မွန်လူမျိုးကို တလိုင်းမျိုး ဟု ခေါ်ပြီး၊ မွန်တို့ကလည်း ဗမာကို အရည်းကြီးမျိုး၊ အရည်းကြီးမယား ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ ဤကား စာမတင်သည့် အရပ်အထာ စကား ဖြစ်သည်။
ယခု မြန်မာနိုင်တွင် ထွန်းကားနေသည့် ဓါတ်ရိုက် ဓါတ်ဆင်၊ ယတြာ ပြုလုပ်နေသော့ ဗေဒင် ဆိုင်ရာဂိုဏ်းများဖြစ်သည့် ဆန်းဂိုဏ်း စသော ဂိုဏ်းဂဏများသည် တန္တရယာန၊ မန္တရယာန အရည်းကြီးဂိုဏ်းက ဆင်းသက်သည့် ပညာရပ်များ ဖြစ်သည်။ အရည်းကြီး ခေတ်လွန် ခင်ကြီးဖျော်နှင့် ဗားမဲ့ဆရာတော်တို့ ထင်ရှား၏။ ဥပမာ ဥုံ.. ဆိုသော စကားလုံးသည် ဗြဟ္မာဏ၀ါဒ၏ မူရင်း စကားလုံးဖြစ်သည်။ ဥုံ= သစ္စာ။ ထေရ၀ါဒ၏ ပါဠိ ပိဋိကတ်တော်တွင် ဥုံ .. ဆိုသည့် စကားလုံးကို မသုံးပြုပါ။ ပွဲကျောင်းသား ဆိုသည်မှာလည်း မဟာယာန၏ ဘုန်ကြီး ကျောင်းသားကို ဆိုလိုပါသည်။
သိခဲ့ရသည့် မြောက်ပိုင်း မဟာယန၀ါဒသည် မဟာဖိုဝါဒကို အခြေခံ ပြုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ သတ္တ၀ါတိုင်း အထူးသဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်အတွင်း ယောင်္ကျားသည် မြင့်မြတ်၏။ ထိုယောင်္ကျားတိုင်းသည် ဘုရားဆုပန်ခွင့်ရှိသည်။
ထေရ၀ါဒတွင်မူကား ထိုအတွေးအခေါ်ကို လက်မခံပါ။ အကျင့်သီလကို ကောင်းစွာ စောင့်ထိန်းနေပြီး သံသရာကို လွတ်မြောက်နိုင်သည့် သူတော်စဉ် ရသေ့ ရဟန်းမျှသာ ဘုရား ဆုပန်ခြင်းဆိုသော အမှုကို ပြုနိုင်သည် ဟု လက်ခံသည်။ သုမေဓ ရသေ့ ဘုရား ဆုပန်ခဲ့သည့် အကြောင်းအရာကို ထောက်ရှု့ ဟန်ရှိသည်။
ဒဿနစာပေနှင့် မရောနှောသည့် အပိုင်းမှာ အိန္ဒိယမှ သီဟိုဠ် ( ယခုသီရီလင်္ကာ ) သို့ တောင်ပိုင်း ထေရ၀ါဒ နိုင်ငံများသို့ ပျံနှံ ရောက်ရှိသွားသဖြင့် ဒဿနစာပေနှင့် အရောမခံသည် ထေရ၀ါဒ ပါဠိ ပိဋိကတ်တော်များသည် အိန္ဒိယတွင် တိမ်ကောသွားရပြီး ဒဿန စာပေနှင့် အရောခံလိုသည့် သက္ကတ ပိဋိကတ်တော်များသာ အိန္ဒိယတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မဟာယနသည် ပိဋိကက်စာပေ သဘောတရားများ ဆုတ်ယုတ်ပြီး ဒသာနစာပေ သဘောတရားသာ လက်ခံသည့် ၀ါဒဖြစ်သည်။
တောင်ပိုင်း သီဟိုဠ်ကျွန်းသို့ ပြန့်နှံ့သွားသည့် ဗုဒ္ဒစာပေသည် သီဟိုဠ်ဘာသာဖြင့် တည်ရှိနေသောကြောင့် အဋ္ဌကထာဆရာ ရှင်မဟာ ဗုဒ္ဒဃောသသည် ပါဠိဘာသာသို့ ပြန်လှည် ပြောင်းယူခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသုံးပြုနေသည့် ဗုဒ္ဒ၏ ပါဠိ ပိဋိကတ် စာပေသည် မူရင်းပါဠိမှ သီဟိုဠ် ဘာသာ၊ ၎င်းမှတဆင့် ပါဠိဘာသာသို့ တဖန် ပြောင်းယူခဲ့သော ပိဋိကတ်တော် ဖြစ်သည်။ ဘာသာပြန် ရှင်မဟာ ဗုဒ္ဒဃောသ က “ ဘာသာတခုမှ ဘာသာတခုသို့ ပြောင်းယူခြင်းသည် အနည်းနှင့် အများ မူရင်း အနက် အဓိပ္ပါယ်ကို ချွတ်ယွင်းစေနိုင်သဖြင့် မူလရှိရင်းစွဲ ဘာသာအတိုင်း ထားရှိခြင်းက ပိုကောင်းမွန်သဖြင့် ပြန်လှည်ထားရှိကြောင်း” ကို အမှာစာဖြင့် ရေးခဲ့သည်။
တောင်ပိုင်း ဗုဒ္ဒဘာသာ၏ မူရင်း ပိဋိကတ်တော်ကို ရှင်မဟာကသာပ စသည့် မထေရ်ကြီးများ ပထမ သံဂါယနတွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဒ၀ါဒစတင် ပေါပေါက်ပြီး အနှစ် ၁၀၀ ခန့်တွင် ကွဲခဲ့သည်ဟု ဆို၏။ ထေရ နှင့် ယာန သည် ပထမ သံဂါယနတွင် ကွဲခဲ့ဟန်ရှိသည်။ အတိအကျ မသိပါ။ တချို့ကလည်း ပထမ သဂါယနတွင် အတည်ပြုသော မူရင်း ပိဋိကတ်တော် ဗုဒ္ဒဘာသာကို လက်မခံသည့်အတွက် ဒုတိယ သဂါယနတွင် ကွဲခဲ့သည့်ဟု ဆို၏။ တချို့ ပညာရှင်များလည်း တတိယ သံဂါယနအပြီး ထေရ၀ါဒနှင့် ခြားခြားနားနား ကွဲခဲ့ရသည် ဟု ဆိုပြန်သည်။
အကြောင်းအရင်းက အပေါ်မှာ ဖေါ်ပြထားသည့် ဘုရားဆုပန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကွဲခဲ့သလို ၀ိနည်းသိက္ခာကို မည်မျှလောက် ထိန်းသိမ်းမည်နည်း ဟူ၍ သဘောထားအပေါ်လည်း ကွဲခဲ့ပါသည်။ နောက်တခုက မဟာ ယာန ဘာသာပညာရှင် တယောက်ဖြစ်သည့် ရှင်နဂရဇ္ဇုနက “ နိဗ္ဗာန်သည် သံသရာ ဖြစ်ပြီး သံသရာသည် နိဗ္ဗာန် ဖြစ်သည်” ဟု တင်ပြသည်။ ထိုသဘောတရားကို နိဗ္ဗာန်သည် သံသရာ၏ ထွက်ပေါက် ဟု လက်ခံသည့် ထေရ၀ါဒက လက်မခံနိုင်ပေ၊ ပြသာနာက ပုထုဇဉ်များ အဓိပ္ပါယ် မဖွင့်ဆိုနိုင်သည့် နိဗ္ဗာန်သည် ကိုယ်ထည် ဒြပ် ရုပ် နမ် ရှိသလား မရှိသလား အပေါ်မှာ ထေရ၀ါဒနှင့် မဟာယာန ဆို ကွဲခဲ့သည် ဟု ပညာရှင်များက ထောက်ပြသည်။ မဟာ ယာန ပေါ်ပေါက်လာသည့် တခြားခြားသော အယူအဆများကို ပညာရှင်များလည်း သေသေချာချာ မသိခဲ့ပါ။
ကျွန်နော် ထင်မြင်သည်က ရှင်တော်မြတ် ဂေါတမ ဗုဒ္ဒသည် စင်္ကြာဝလံသည် တည်မြဲလော မတည်မြဲလော၊ အဆုံးရှိလော အဆုံးမရှိသေလာ ဆိုသည့် အရှင်မာလုကျပုတ္တ မထေရ်၏ အမေးကို မဖြေဆိုခဲ့သောကြောင့် ၀ိဝါဒများ ကွဲပြားရပြီး ထာဝရ ဗုဒ္ဓဘုံဝါဒနှင့် ထာဝရ ဘုရားသခင်ဝါဒက ယနေ့ ကမ္ဘာတွင် ထွန်းကားလာခဲ့သည်။
ဆရာတော် ဦးဓမ္မပိယ Ph.D
Posted by လူလ at Monday, November 10, 20084comments:
မြောက်ဖက်ရပ်ဝန်း တောင်တန်းဆီက လွင့်ပါးလာတဲ့
နောက်ဖက်ရပ်ဝန်း ပင်လယ်ဆီက ဝှေ့လွင့်ခတ်တဲ့
ဆောင်းရမ်းညချမ်း အံတုရန်ထွက် နွေးထွေးလှတဲ့
မြတ်နိုးသူ၏ စကားလုံးများ သံစဉ်လေးလို ဖြစ်ချင်စေတယ်..။
ကန္တာရအတွင်း ဆာလောင်လူသား စမ်းတ၀ါးဝါး တံလျှံငွေ့ငွေ့ ..
မြင့်မားတောင်တန်း ပျောက်ဆုံးလမ်းကို ပြန်တွေ့လိုက်သည့် ..
ငြိုးမပြတ်ဖြိုး ထက်ချုံးစွေမိုး ကြောက်ရွံမောရင်း ရင်ငွေ့နွေးကို
ပူနွေရိုင်းနေ့ အေးစိမ့်ရေကြည် တပ်မက်မောစွာ သောက်သုံးချင်တဲ့
ရှစ်ခွင်မှောင်မဲ ဆောင်းနှင်းကြမ်းဖွဲ တွန်းလှန်ချွေဖျက် ချစ်သူနှစ်ဦး
မျှော်လင့်ရင်း တပ်မက်စွာ သက်ထက်ဆုံး ချစ်ရလို၏။ အရှင်….
ဓါတ်ပုံကို Yahoo Images မှ ရှာဖွေယူသုံးထားပါသည်။
Posted by လူလ at Saturday, November 08, 20082comments:
လှုပ်ခတ်သွားသော မီဒီယာလောကကို လွင့်မျောခြင်း
မိမိ ပြောဆို ပြုမူလိုက်သည့် အမှုသည်…
( ၁ ) မိမိအတွက် အကျိုး ရှိ၊ သူတပါးလည်း အကျိုး ရှိ..
( ၂ ) မိမိအတွက်သာ အကျိုး ရှိ၊ သူတပါးအတွက် အကျိုး မရှိ..
( ၃ ) မိမိအတွက်လည်း အကျိုး မရှိ၊ သူတပါးအတွက် အကျိုးရှိ..
( ၄ ) မိမိအတွက် အကျိုး မရှိ၊ သူတပါးအတွက်လည်း အကျိုးယုတ်..
သင်သည် သူတပါးအား လက်ညိုး ထိုးကြည့်လိုက်ပါ။
ထိုအပြုအမူကို ပြုလုပ် ပြီးသည့်နောက် မိမိ၏ လက် အနေအထားကို ပြန်လှည် ကြည့်ရှု့ သင့်သည်။ သင်၏ လက်ပုံသဏ္ဍာန်က သူတပါးအပေါ် လက်ညိုးတချောင်းသာ ထိုးခဲ့ပါသည်။ မိမိ၏ လားရာဖက်သို့ ကျန်သည့် လက်လေးချောင်းက စုပြုံပြီး ၀င်ရောက်နေသည်ကို သတိပြုလိုက်ပါ။ သက်ရောက်မှုတိုင်းတွင် အချိုးအစား မညီမျှသော အင်အားများဖြင့် တန်ပြန် သက်ရောက် နေလိမ့်မည်။
ဝေဖန်ခြင်းဆိုသည်မှာ အပြုသဘောဖြင့် ဝေဖန်ခြင်းနှင့် အဖျက်သဘောဖြင့် ဝေဖန်ခြင်းဟု နှစ်မျိုး နှစ်စား တွေ့ရှိလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
လူဆိုသည်မှာ အတ္တဖြင့် ယှဉ်ပြီး လောဘ ဒေါသ ရှိနိုင်သည်ကို လက်ခံပါသည်။ အဆိုးဝါးဆုံးက နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် အခြေချနေထိုင်ကြသည့် မြန်မာ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းများတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ပြောဆို ကြွားဝါရင်း တယောက်နှင့်တယောက် အမြင် ကြည်လင်ခြင်း မရှိသည့် မောဟ သေးသေးများ ပေါ်ပေါက်ရသည်မှာ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ဖြစ်၏။ အမြင် မကြည်လင်ခြင်းဆိုသည့် စိတ်အလျင်က အနေအထား တခုမှာ အဆုံးမသတ်ကြပဲ၊ အများနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး ပြုလုပ်ရသည့် လူမှု၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ များအတွင်းသို့ ဆိုးဝါးစွာ ၀င်ရောက် လာခဲ့ပါသည်။
အဖြစ်ပုံ သနက်စုံကို စိန်ဗေဒါကြီး၏ ဆိုင်းမပါပဲ တင်ပြရမည်ဆိုလျှင်ဖြင့်...
ပြသာနာ အစ ဟော်လန်က ဆိုရမလား၊ အင်္ဂလန်က ပြောရမှန်းတောင် မသိရတဲ့ အဖြစ်
“ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေအတွက်တော့ အင်မတန်ရှက်စရာလဲ ကောင်း ၀မ်းနည်းစရာလဲကောင်းတဲ့ ကိစ္စတွေကို ပြောချင်ပါတယ် ။ အရေးယူ တာ မယူ တာကတော့ သံဃာ့ ဥသျှောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ကိစ္စပါ
အင်္ဂလန် နိုင်ငံ ကော်လန်ဒေးမှာ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပါတယ် အဲဒီက ဦးဥတ္တရဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးဝတ်ဟာ လိင်တူဆက်ဆံမှုတွေ ပြုလုပ် နေသလို စက်တင်ဘာမှာ သံဃာတော်တွေ အသက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာ က လှူတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်း သူပိုင် အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး သူနဲ့ လိင်တူဆက်ဆံ
တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသား ဆိုတဲ့ လူနဲ့သူ့ အတွက်ပဲ အသုံးချနေတာ သိသင့်ပါတယ်။ ”
To: ibmohq@gmail.com, matali18@gmail.com, bryanbanya@yahoo.co.uk, burmese@bbc.co.uk, kztha@hotmail.com, shweyong@yahoo.com, ncgub@ncgub.net, news@khitpyaing.org, nita.may@bbc.co.uk, onlineeditor@khitpyaing.org, shwen@rfa.org, spaung@irrawaddy.org, tin.htar.swe@bbc.co.uk, web_editor@dvb.no, webadmin@khitpyaing.org, zinlinn@cscoms.com, admin@dvb.no, ahhara@hotmail.com, acn@dvb.no, burmese-service@voanews.com, burmese@www.rfa.org, comment@dvb.no, comments@khitpyaing.org, director@dvb.no, dvbburma@online.no, editor@mizzima.com, editors@irrawaddy.org, features_dept@dvb.no, hit_taing@yahoo.com, khinet@rfa.org, kmw@dvb.no, kswin@voanews.com
စသော အတိုက်အခံ ၀စ်ဆိုက်များသို့ လိပ်မူပြီး အောင်ဇော်မိုး၈၈ အိုင်ဒီဖြင့် ပို့ပေးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အတိုက်အခံ မီဒီယာ အသီးသီးက မဖေါ်ပြသင့်လို့ ထင်မြင်ယူဆပြီး မဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အခြေအမြစ်မရှိသော သတင်း၊ သတင်းမဟုတ်သော အတင်း ။ အထောက်အထား ခိုင်လုံခြင်း မရှိသော အဖျဉ်းတခုဖြစ်သာ မြင်ပြီး မီဒီယာ တန်းမ၀င်လို့ သတင်း အဖြစ် မဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်လို့ ယူဆရမည်။
နောက်ပြီး ပုတ်ခတ် စွပ်စွဲတဲ့သူက မည်မျှလောက် ခံစားချက်တွေ ပြင်းထန်နေသလဲတော့မသိဘူး၊
ထိုအကြံအစည် ထမြောက် အောင်မြင်ခြင်း မရှိသောကြောင့် စွပ်စွဲ ပုတ်ခတ်သူများသည် ဟော်လန်နိုင်ငံအတွင်း စာတိုက်မှတဆင့် စာတွေကို စာအိတ်ဖြင့် လူအတော်များများထံသို့ ပို့နေပါသည်။ ဒါက ပြုသူနှင့် အပြုခံရသူတို့ ပဋိပက္ခက ပြင်းထန်မှုကို ပြသနေသည်။
ထိုမှတဆင့် ဘလောင်္ဂ မီဒီယာတွင်း နာမည်ကြီးဖြစ်သည့် ကိုမိုးသီးဇွန် ဘလောင်္ဂ စီဘောက်များတွင် ခိုင်လုံခြင်း မရှိသည့် သတင်း သို့မဟုတ် အတင်းကို ၀ါဒ ဖြန့်ပြန်သည်။
၎င်းပြသာနာနှင့် စပ်ယှဉ်ပြီး အနောက်နိုင်ငံ မြန်မာ့ အတိုက်အခံ လောကအတွင်း ဖိန်ဖိန်တုန်အောင် ကျော်ကြားလှစွာသော ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမိုးသီးဇွန် ခေါင်းဆောင်သည့် အဖွဲ့နှင့် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များတွင် စတင် ပေါ်ပေါက်လာသော သာသနာပြုခြင်းကို အခြေခံ၍ အတိုက်အခံလောကကို စိပ်ဝင်လာသော သာသနာ့ ဥသျှောင်အဖွဲ့တို့ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်သွားရသည်။
အမှိုက် အစ၊ ပြသာဒ်မီးလောင် ဆိုသည့်အတိုင်း မည်သူမှန်း မသိလိုက်ရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်၏ ခြေထိုးမှုလား ဒါမဟုတ် ပူပေါင်း ကြံစည်မှုလားဟု အောက်ပါ အကြောင်းအရာများက ထင်မြင် ဆင်ခြင်စရာ များ ဖြစ်လာသည်။
“ အင်္ဂလန်က လူတယောက်က အရှင်ဦးဥတ္တရအား လိင်တူ ဆက်ဆံမှု။ ငွေကြေး အလွဲသုံးစားမှုများကို စွပ်စွဲရေးသားထားပါတယ်။ သူအနေဖြင့် အမြဲ ထိုင်မပိတ်နိုင်ပါ” ဟု အကြောင်းပြသည်။
ဒီနေရာမှာ အမြင်တခုပေါ့။ “ သူ့အနေဖြင့် အမြဲတမ်း ထိုင်မပိတ်နိုင်ပါ ” ။ ဘလောင်္ဂမှာ နေ့တိုင်း လိုလို သတင်း ဆောင်းပါးများ အမြဲ တင်နေသည်။ ထိုအရာကို သူ့အနေဖြင့် အချိန်မပေးနိုင်သည်က မှားမှန်သဘောကို စဉ်းစားရခြင်း ဖြစ်သည်။
ကိုမိုးသီးဇွန်၏ နောက်တခုသော အကြောင်းပြချက်က “ အရင်က သူ့၏ စိဘောက်ကို ဖွင့်ခဲ့တယ်။ ဝေဖန်စာ ဆဲစာတွေ ရောက်လာလို့ ရီဂျက်စတာ ပြုလုပ်ရတယ်” လို့ ဆိုထားပြန်သည်။
ကိုမိုးသီးဇွန်ဟာ ၈၈ ရဲ့ သင်္ကေတ ပါ။ စစ်အစိုးရကို ရန်ငါ စည်းပြတ်တဲ့ သူတယောက် ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီကို ယုံကြည် မြတ်နိုးသည့် အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် တယောက် ဖြစ်သည် ဟု ကြားဖူးပါသည်။
ဖြတ်သန်းမှုတိုင်းမှာ လူကြီးတယောက်အဖြစ် ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြုနိုင်သူ ဖြစ်သည်။ ဒါဗေမဲ့ အခု ဖြေရှင်းသည်က နယကဂုဏ် မဲ့နေ၏။ မည်သည့် ကိစ္စရပ်များတွင် ဦးဆောင်သူတို့၏ နှလုံးသားဖြင့် မဟုတ်ပဲ ထိုပုတ်ခတ်သော ပစ်စာကို သူ ဖွင့်စေချင်တဲ့ စိတ်ဖြင့်သာ ပြုခဲ့တယ်လို့ ထင်မှတ်စရာ ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး ဘလောင်္ဂရဲ့ စီဘောက်ဆိုတာကလဲ ရီဂျက်စတာ လုပ်ကြရင် ဘလောင်္ဂကို ပိုင်တဲ့သူက စီစစ်ပြီးမှ ဖွင့်ရသည်။ တကယ်လိုများ ကိုမိုးသီးဇော်ကို စစ်အစိုးရ ဘက်တော်သားတယောက်က စီဘောက်မှာ လာဆဲရင် သူ့အနေ့ဖြင့် ဖျက်လိုက်မှာ သေချာတယ်။ ဒါလည်း အနာဂါတ်မြန်မာ နိုင်ငံရေးလောကတွင် ဆိုးကျိုးတခုပဲ။
ပြီးနောက် “ကျနော်တို့ ပိတ်လိုက်ရင် ကျွန်နော်တို့ ကိုယ်တိုင် လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်ကို ဆင်ဆာ လုပ်မိသလို ဖြစ်မယ်” ပြောထား၏။ ဆိုတော့.. အပေါ်က ပြောထားသည့်အတိုင်း ဝေဖန်စာနှင့် ဆဲစာများ ရောက်လာသောကြောင့် ရီဂျင်စတာပြုမှာ ၀င်ခွင့်ရသည် ဟု ဆိုထားသည်။ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်ရော လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်ကို ချိုးဖေါက်သလို ဖြစ်မှာပေါ့..မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘက်လိုက်ရေး၊ မလိုက်ရေး၊ သမာသမတ်ကျရေး သဘောထားနှင့် ပတ်သက်ပြီး အရင် အာအက်ဖ်အေ သတင်းဌာနမှာ လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုမင်းဇင်က ချပြ ဆွေးနွေးဖူးတယ်။ ဤအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး အတိုက်အခံ မီဒီယာ လောကမှာ ပွက်လော့ရိုက်တာ အမှန်ပဲ။
ကျွန်နော် အမြင်တော့ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ မီဒီယာက ကိုယ့်ဝါဒကို အများအားဖြင့် ဘက်လိုက်တာ များပါတယ်။ ဘက် လိုက်သင့်တယ်လို့ ယူဆ၏။ ထို့ကြောင့် ထို စွပ်စွဲ ပုတ်ခတ် ရေးသားလာသည့် အကြောင်းအရာကို ဖေါ်ပြခြင်းဟာ အလိုတူ အလိုပါ ပုံစံ ဖြစ်လျက်ရှိသည်ကို ကျွန်နော်တို့လို ပြည်သူ တယောက်အနေဖြင့် ထင်မြင်စေခဲ့ပါတယ်။
တကယ်လိုများ ထိုနေရာတွင် အရှင်ဦးဥတ္တရ မဟုတ်ပဲ ကိုမိုးသီးဇွန်ကို ပုတ်ခတ်မယ်ဆိုလျှင် ကိုမိုးသီးဇွန်အနေဖြင့် မလွဲမသွေ ပိတ်ဖျက်မိမှာ သေခြာပါ၏။
ဘလောင်္ဂတခုအတွင်း စိဘောက်တွင် မည်သည့် နာမည်နှင့်ဖြစ်စေ ၀င်ရောက်ရေးသားသောခါ ဘလာင်္ဂပိုင်ရှင်က မလွဲမသေ သိနိုင်သည့် အနေအထား ဖြစ်သည်။ စီဘောက်၏ အောက်ဖက် ဒေါင့်တွင် GetaCbox ရှိသည်။ ထိုမှတဆင့် မိမိက စီဘောက်အစပြုလုပ်တုန်းက နာမည်နှင့် ပစ၀ကို ရိုက်ထည့်ပြီး စီဘောက်အတွင်း Control Panel Home သို့ ၀င်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ပစ၀ဖြင့် ၀င်ရောက်ပြီးသောအခါ Messanges ခေါင်းစဉ်အောက်မှ Massages ကို ကလစ်ပြီး ကြည့်ရှူ့လိုက်လျှင် စီဘောက်အတွင်း ၀င်ရောက်ရေးသားထားသည့် လူဂ္ဂိုလ်၊ ၎င်း ရေးသားထားသည့် စာ၊ နေ့ရက် အချိန်နှင့် IP လိပ်စာကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ IP လိပ်စာကို သိရှိပါက စီဘောက်အတွင်း စာရေးသူသည် မည်သည့်အရပ်၊ မည်သူဖြစ်ကြောင်း ယေဘုယျ ခန့်မှန်း နိုင်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ “ မိုးသီးဇွန် ဘလောင်္ဂတွင် သာသနာ ဦးသျှောင် အတွင်းရေးမှူး ဆရာတော် ဦးဥတ္တမအား မတရား စွပ်စွဲ ပြောဆိုနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မည်သူ မည်ဝါ ရေးနေသူကို ဘလောင်္ဂပိုင်သူများက အတိအကျ သိရမည်” အစချီပြီး သာသနာ့ ဦးသျှာင်အဖွဲကြီးက ကြေညာချက် စာတစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သာသနာ့ ဦးသျှောင်အဖွဲ့ အနေဖြင့် တချို့သော အတိုက်ခံ နိုင်ငံရေးသမားများက နအဖ မိဒီယာကဲ့သို့ ယင်းတို့အား တိုက်ခိုက်နေသည့် ဟု ထင်မြင် ယူဆနေပါသည်။ ကိုမိုးသီးဇွန် အနေဖြင့်လည်း “ သံလာ့မော်လီရဲ့ဖြေရှင်းချက် (၀ါ) စုံစမ်းတောင်းဆိုချက်ကို လေးစားရိုသေစွာနှင့် ပြန်လည် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား။ ဓမ®မိတ်ဆွေတို့ အနေနဲ့လည်း ဦးဥတ္တရနှင့်ပါတ်သက်သော သတင်းအား သံလာမော်လီဒ ကြေငြာစာပါ e-mail ကို ဆက်သွယ် ပေးပို့်သနိုင်သလို မိမိတို့ wefightwewin@gmail.comကိုလည်း ပေးပို့နိုင်ပါကြောင်း မေတ္တာရှေ့ထား* အသိပေးနိုးဆော်အပ်တယ်”
ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြသာနာနှင့် ပတ်သက်၍ သာသနာ့ ဥသျှောင်အဖွဲ့နှင့် ကိုမိုးသီးဇွန်သည် အီးမေးဖြင့်သာ အပြန်အလှန် ဖြေရှင်းချက်များ ထုတ်ပေးရန်အတွက် တောင်းဆိုနေကြသည်။ ပြသာနာကို ဖြေရှင်းခဲ့သည် မဖြေရှင်းခဲ့သည်မှာ အခုတိုင် ရှင်းရှင်း လင်းလင်း မသိရသေးပါ။ ဒါလည်း ရှေ့ဆက်ရမည့် လမ်းတွင် ငြောင့်တခုအဖြစ် တည်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုပြသာနာက ကိုယ့်ဖက် အားနည်းချက်ဆိုရမလား၊ မျှားတစင်းဖြင့် ငှက်နှစ်ကောင် ထိသွားသည့် ပုံစံဖြစ်ပုံ ရ၏။
ပြီးနောက် လုပ်ကြံစွပ်စွဲပုတ်ခတ်သူက ဆက်လက်ပြီး
“ပီနန်းဆရာတော်ကြီးအင်္ဂလန်ကို ကြွလာစဉ်ကလည်း ဆရာတော်ကြီးကို ပစ်ထားပြီးတော့
သူ့ လင်ငယ်လေးနောက်ကို ကောက်ကောက်ပါလိုက်သွားပြီး ဟို ပို့ ဒီပို့ လုပ်ပါတယ်
ဆရာတော်ကြီးခမျာ သွားချင်လာချင်ရင် ကုန်းကြောင်းလျှောက်ပြီး ဘတ်စ်ကားတိုးစီးရပါတယ်
ဟုတ် မဟုတ်သည်ကို စာရေးသူ အနေဖြင့် မျက်မြင် မဟုတ်သဖြင့် အတိအကျ သုံးသပ်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ဒါဗေမဲ့ တာဝန် ရှိသူများ၏ အစိအစဉ် ညံ့ဖျဉ်းမှုကြောင့် တကြောင်း၊ ကား အလုံအလောက် မရှိသဖြင့် လိုအပ်ချက်တွေ မပြည်စုံ ဖြစ်သွားကြောင်း၊ ဆရာတော်က လမ်းမလျှောက်ပါ အကြောင်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက
“ အဲဒီတုန်းက ဦး---၊ မ--- က ဦးဥတ္တရကို ၈၈ ဟောပြောပွဲ အရင်ပို့ နောက်ပြီးမှ ဆရာတော်ကြီးကို ဘူတာလိုက်ပို့ရတာ ” ဟု ရှင်းပြပြောဆိုခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ သူက “ ဘုန်းကြီးကျောင်း နဲ့ ဘူတာက မိနစ် ၂၀ လောက် ဘတ်စကား စီးရတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ကားဖြင့် သွားသဖြင့် ကားလမ်းတွင် ယာဉ် ပိတ်အဆို့များသည့်အတွက် ရထား မမှီ ဖြစ်မှာ စိုးပြီး ကားပေါ်မှ ဆင်းပြီး ကူတို့ဖြင့် ဘူတာကို ဖြတ်လမ်းက သွားပါသည်။ ကုတို့ဆိပ်တွင် ဘုန်းဘုန်း ဦးဥတ္တရတို့ အဖွဲ့ လာစောင့်သည်” ဟု ဆိုပါသည်။
အထက်ပါ ဟော်လန်က တာဝန်ရှိသူတဦး ရှင်းပြထားကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးအကြောင်း မခိုင်လုံတဲ့ ပုတ်ခတ်သူတွေဖက်က စွပ်စွဲမှုတခု ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရလိမ့်မည်။
ပြီးနောက် “အဲဒီကော်လန်ဒေးကျောင်းကို ကျမတို့အင်္ဂလန်မှာ ကော်လံဂေး ကျောင်းလို့ တောင် ခေါ်နေကြပါပြီ။” ဟု ရေးသားထားသည်။ ထိုစွပ်စွဲ ရေးသားချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အင်္ဂလန်တွင် နေထိုင်သော လူများ အနေဖြင့် သိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ၎င်း ကျောင်းတော်အား ကိုးကွယ်နေသော အမျိုးကောင်းသား အမျိုးကောင်းသမီးများကို စော်ကားရာ ရောက်နေသည်။
အောင်ဇော်မိုး ၈၈ က အကုသိုလ် ခံစားမှု အားကြီးလွန်းသောကြောင့် ဖြစ်မည်။ ယောင်္ကျားကနေ မိန်းမ အသုံးအနှုံ့း ဖြစ်သွားရ၏။ ဘုရားဟော သုတ္တန်တွေမှာ အဆင်းလှတဲ့ သူတောင်ကောင်း ရဟန်းကို ကာမ ဆက်ဆံချင်လိုက်တာဆိုပြီး စိတ်က ပျက်မှားလိုက်တာ ချက်ခြင်းလက်ငင်း ဒီဘ၀မှာ တင် ယောင်္ကျားစင်စစ်ကနေ မိန်းမ ဖြစ်သွားပြီး ကလေးတွေတောင် မွေးလိုက်ရသည်ဟု ဖတ်ရသည်။။ အင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အခုလဲ အကျင့်သီလရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို တရားဝင်နည်းဖြင့် မဖြေရှင်းပဲ စွပ်စွဲ ပုတ်ခတ် စော်ကားသဖြင့် သူလည်း “ကျမ” ဖြစ်သွားရ ပြန်။ ဒါမဟုတ် စွပ်စွဲသူတို့သည် တယောက်တည်း မဖြစ်တန်ရာ။
“ ကိုဖြိုးဆိုတဲ့ စက်မှု ၁- ၀န်ကြီး မောင်အုန်းသားဖြစ်ပါတယ်။”
စက်မှု ၁ က မောင်အောင်သောင်း မဟုတ်ဘူးလား ။ မောင်အုန်း က ဘယ်တုန်းက ဖြစ်သွားတာလဲ မကြားဖူးရပါလား။
“ နာဂစ်မုန်တိုင်းမှာ ဒုက္ခရောက်သွားကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် လှူဒါန်းတဲ့ ငွေတွေကအစ အလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးအတု ပါ
အဲဒီတုန်းက လှူဒါန်းငွေ ဒေါ်လာခြောက်သောင်း ပေါင်လေးသောင်းခွဲ ကို သူ့ အိတ်ထဲထည့်ပြီး ဘုန်းထားပါတယ် အဲဒါ သံဃာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့နဲ့ တော်လှန်ရေး သမားတွေအနေနဲ့ ငွေစာရင်းစစ်နိုင်ပါသလား ။ တော်လှန်ရးကို အားကိုး လိုက်မယ် ”
စွပ်စွဲ ပုတ်ခတ်သူက တော်လှန်ရေးကို တော်တော် မျက်မှန်းကျိုးနေပုံရ၏။ ၎င်းကိစက အတိုက်အခံ တော်လှန်ရေးနှင့် လားလားမဆိုင်ပါ။ တော်လှန်ရေးကိုလည်း ရောယောင်ပြီး တိုက်ခိုက် နေပြန်ပြီ။
“သူဟာ နာဂစ်မုန်တိုင်းအတွက် လူဒါန်းငွေထဲက မင်းသား ချမ်းသာ ( နအဖနဲ့ ပေါင်းနေသူ)
နဲ့ လူ ၂၀ ခန့် ကို မြန်မာ ပြည်က ခေါ်ယူခဲ့ပြီး အငြိမ့်ခံပါတယ်။စုစုပေါင်း ပေါင်၁၂၀၀၀ (ဒေါ်လာ သုံးသောင်းခန့်) သုံးခဲ့ပါတယ်။လက်မှတ်တစေင်ကို ပေါင်သုံးဆယ်နဲ့ရောင်းခဲ့ပါတယ်
ဒါပေမဲ့အငြိမ့်ကတဲ့အခါမှာ လူ က ၃၀ ခန့်သာ လာပါတယ်။ သူ့ ကို ဘာလို့ အဲလို အငြိမ့် ပွဲကိုခေါ်တာလဲ မေးတော့ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုကို အင်္ဂလိပ်တွေကို ပြချင်လို့ ပါတဲ့”
အထက်ပါ စွပ်စွဲချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အင်္ဂလန်တွင် နေထိုင်သည့် ခင်မင်ရသော မိတ်ဆွေနှင့် ကျွန်နော် မက်ဆင်ဂျာတခုတွင် ချက်ဖြစ်သည်။
“ phonyaung: ဦးဥတ္တရက ချမ်းသာဇာတ်အဖွဲ့ကို ခေါ်သလား
မိတ်ဆွေ: အင်းခေါ်တယ် သူ့ ပိုက်ဆံနဲ့ သူခေါ်တာ ဘာဖြစ်လဲ
phonyaung: အင်း နောက်ပြီး ဒီစာရင်းကို ထုတ်ပြန်သလား ပိုက်ဆံက ဘယ်ကလာတယ်
မိတ်ဆွေ: စာရင်းစစ်လို တယ်ပေါ့..ဒို့ လည်းမသိဘူးကွယ်
phonyaung: အင်း ကျေးဇူး။ ကျွန်နော် လိုချင်တာက ဒီပိုက်ဆံက ဘယ်က လာတယ် နောက်ပြီး ဘယ်လောက် သုံးတယ်လို့ကြားလိုက်သလား
မိတ်ဆွေ: နာဂစ်အတွက် က တာတော့ သူ့အဖွဲ့ နဲ့ သူ ပေးထား ပြီးသားနေမှာပေါ့
phonyaung: ဘယ်လောက်ရှုံးတယ် အင်း စွပ်စွဲတဲ့သူက အတိအကျ စွပ်စွဲနေလို့လေ
မိတ်ဆွေ: စွပ်စွဲတဲ့သူက အဝေးကနေ စွပ်စွဲနေတာကိုး တစ်ကယ် လုပ်တဲ့သူက မြင်တာပေါ့ ပိုက်ဆံဘယ်ကရသလဲ.. ဦးဥတ္တရ ဘယ်လောက်ချမ်းသာလို့ လဲ အဲလောက်မချမ်းသာဘူး
phonyaung: ဟုတ် မေးစရာဖြစ်လာပြီလေ
မိတ်ဆွေ: ကျနော်လည်း မသိဘူး ဘယ်က ရသလဲလို .. စပွန်ဆာ ဆိုတာ နာမည်ခံတာလေ နောက်ကွယ် ဘယ်သူပါသလဲ ဘယ်သိမလဲ
phonyaung: အင်း နောက်ပြီး ဒီစာရင်းကို ထုတ်ပြန်သလား ပိုက်ဆံက ဘယ်ကလာတယ်ပေါ့
မိတ်ဆွေ: နာဂစ်အတွက် က တာတော့ သူ့အဖွဲ့ နဲ့ သူ ပေးထားပြီးသားနေမှာပေါ့
phonyaung: ကိုယ်ပိုင်ဆို ပြသာနာမရှိဘူး စာရင်းက ထုတ်ပြန်သင့်တယ်လေ
မိတ်ဆွေ: လူအများနဲ့လုပ်တာမှ မဟုတ်တာလေ ဦးဥတ္တရ မွေးနေ့ ရွှေရတု လုပ်တယ် နှစ် ၅၀ ပြည့် အဲဒါ ချမ်းသာအဖွဲ့ကို ခေါ်တယ်.. တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ.. နာဂစ်အတွက် က စေတယ်.. တစ်ချက်ခုတ် ၂ ချက်ပြတ်အောင်
ကိုယ်က လက်မှတ်ရောင်းစရာမလိုဘူး.. အဲဒီ theatre ကနေ ရောင်းပေးတာ.. ရောင်းမထွက်လို့ နေမှာပါ
နာဂစ်အတွက် ကဖို့ က နောက်မှ ဒီရောက်မှ စီစဉ်တာ.. တစ်မင်သက်သက် ခေါ်တာမဟုတ်
ဘုန်းကြီးမွေးနေ့ အတွက်.. ပိုက်ဆံ ဘယ်ကရသလဲတော့ မသိဘူး ဆိုပါစို့လူ ၂၀ ကျော်ဆို ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ကျော်ပေါ့ ဟုတ်လား ၁၅၀၀၀ ပဲ ထားပါ..
phonyaung: မဟုတ်ဘူး၊ စွပ်စွဲထားတာက ပေါင် ၁၂၀၀၀
မိတ်ဆွေ: ပေါင် ၁၂၀၀၀ ဆိုတော့ တစ်ယောက်ကို ပေါင် ၆၀၀ ပေါ့
phonyaung: နေပါဦး အထင်ကို ပြောပါဦး ပေါင် ၆၀၀နဲ့ စပွန်ဆာ လုပ်လို့ရသလား
မိတ်ဆွေ: တစ်ယောက်ကို စပွန်ဆာ ၆၀၀ လေ ဟုတ်ပါဘူး.. စပွန်ဆာ ဆိုတာကတော့.. အဲဒီ လူ ၂၀ ကို ကျွေးမွေးဖို့ ပိုက်ဆံပြနိုင်ရင် ခေါ်လို့ ရတာပေါ့.. ပေါင် ၁၂၀၀၀ ကတော့ ဘုန်းကြီးအကောင့်မှာ ရှိမှာပေါ့
ဘယ်အကောင့်လဲတော့ မသိဘူး.. ရှိရင် ရှိမှာပေါ့ ဥရောပနှင့် တခြားနိုင်ငံက ဘုန်းကြီးအတွက် လှူတာ ရှိရင်လည်း ရှိမှာပေါ့.. သူ့ ဟာသူ ဘဏ်က ချေးငွေထုတ်ပြီး ပေါင် ၂၀၀၀၀ ချေးမယ်ဆိုပါစို့
phonyaung: အင်း ဟော်လန်က ပေါင်၂၀၀၀ လှူတယ်တဲ့
မိတ်ဆွေ: ဆိုပါစို့ .. လက်ရှိ သာသနာ့ရံသီ ၀ိဟာရ ကျောင်းကို re-mortgage ပြန်လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံထပ် ချေးရင်ကော မရနိုင်ဘူးလား.. အဲဒါစဉ်းစားပေါ့ ဒီမှာ ပိုက်ဆံ ချေးတာက လွယ်ပါတယ် ပိုင်ဆိုင်မှု ရှိနေရင် အသာလေးပဲ
phonyaung: အင်း ခင်ဗျားသိသလောက်က ချေးတာလား
မိတ်ဆွေ: ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးမှာ personal financial advisor ရှိတယ်.. ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးက ဆေးရုံမှာ တရားပြ ဆရာလည်း လုပ်တယ်လေ ပိုက်ဆံဝင်တာတွေ ရှိမှာပေါ့.. အဲလောက် ပိုက်ဆံများတာတော့ ကျနော်လည်း ဘယ်ကရမှန်းမသိဘူး.. ဒါပေမဲ့ ဆရာတော်ဘုရားတွေကို ကျောင်းဆောက်ဖို့ လှူတာတွေက စာရင်းတွေ အတိအကျ နဲ့ ပေးထားတာလေ အလွဲသုံးစား လုပ်လို့ ဘယ်ရမလဲ
ဥရောပ တစ်ခွင်က လူတွေက လည်း ပိုက်ဆံကို ဦးဥတ္တရကို ပေးလိုက်တာမှ မဟုတ်တာ ဘဏ်မှာပဲ ထားတာလေ
မြန်မာပြည်လိုမျိုး အရှင်ဘုရား ကျောင်းဆောက်ဖို့ သိန်း၁၀၀ လှူပါတယ်ဆိုပြီး ပေးတာမှ မဟုတ်တာ သူ့ ကျောင်းနံမည်နဲ့ သူ
သံဃာ့နာယကက ငွေဆိုတော့ ဘယ်က ငွေလဲ သူ့ ကို ပေးလို့ လား ပေးလို့ မှ မရတာလေ အဖွဲ့ နဲ့ လုပ်နေတာ သူ့ စာရင်းအင်းနဲ့ သူပဲဟာ
ဒါပေမဲ့လည်း အဲဒီပိုက်ဆံ ဘယ်က ရသလဲ ကျနော်လည်း မသိဘူး ” ဟု ကျွန်နော်နှင့် ပြောဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းနေရာတွင် တခု အကြံပေး လျှောက်ထားခြင်းသည်က အရှင်ဥတ္တရ အနေဖြင့်လည်း ခေါ်ယူခဲ့သော်လည်း စွပ်စွဲသူတို့ ပုတ်ခတ်ထားသည့် ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုကို တရားဝင် စာရင်း ဇယားဖြင့် လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန် သင့်သည်ဟု ထင်မြင်မိကြောင်း။
ထို့နောက် အရှင်ဦးဥတ္တရ၏ ပစ်စာ ပြသာနာကို စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ပြီး တရားစွဲအရေးယူရန် ။
ဘဖြစ်နိုင်ရင် သိတဲ့လူတွေလည်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးရန်။
သာသနာ့ ဥသျှောင်အဖွဲ့သည် မကြားသေးသော ကာလက ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းအဖွဲ့၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ထေရ၀ါဒ သာသာနာပြုမည့် ဆန္ဒဖြစ်သည် ဟု သိရပါသည်။
သာသနာပြုသည့် အရပ်က အတိုက်ခံများ ဖြစ်နေပါသဖြင့် နိုင်ငံရေးက တွဲပြီး ပါလာသည်။ သာသနာပြု ဆိုရာဝယ် ကိုယ့် ဆန္ဒတခုတည်း ရှေ့တန်းတင်ပြီး ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ သာသနာပြုသည့် နေရာက အတိုက်အခံများရဲ့ ဒေသဖြစ်သည့်အလျှောက် သံဃာတော်များလည်း မသိမသာဖြင့် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး လောကထဲ ၀င်သွားရသည်။
သိတဲ့အတိုင်း အခမ်းအနားတခု လုပ်လျှင် ဥပမာ ၈၈၈၈ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းကြွေးပွဲ ဆိုပြီး ဘုန်းဘုန်းတွေကို ပင့်လျှောက်ရ၏။ တရားဟော အမျှဝေပေါ့ ။ အခမ်းအနားတွေ ပြီးရင် အလာဘ သလာဘ အကြောင်းတွေ ဖြစ်ရင်းနဲ့ သံဃာများ၏ လက်ရှိ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးကို မေးလိုသူက မေးဆိုတော့လည်း ဘုန်းဘုန်းခမျှ မယုတ်မလွန် မိန့်ကြား ဖြေဆိုရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို မိန့်ကြားထားသော မှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းပြီး သတင်း မိဒီယာသို့ တင်၊ ဒါက ငါ့ဘုန်းကြီး ဘာညာကြွား၊ ဆိုတာ့လဲ ဘုန်းဘုန်းတွေခမျှ အတိုက်ခံလောကထဲ ရောက်လာခဲ့ရ၏။ အကျင့်သီလ ကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ သာသနာနှင့် ယှဉ်တွဲပြီး နိုင်ငံအရေးထဲ ပါဝင် ပတ်သက်လာရင်း ဗရမ်းဗတာ ဖြစ်နေတဲ့ အတိုက်အခံ အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်း ဖြစ်သွားရသည်။
ကိုင်းကို ကျွန်းမှီ၊ ကျွန်းကို ကိုင်းမှီဆိုသလို ယခုလို ဖြစ်သွားသည့် ပြသာနာတခုမှာ အားလုံး အမှန်မြင် အမြင်မှန်သွားအောင် တာဝန်သိသိဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကူညီပေးကြရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ ယင်းပြသာနာသည် အခုမရှင်းရင် နောက် ရှုပ်လာမည့် ပုံဆောင်ခဲတခုအဖြစ် မြန်မာ့ အတိုက်ခံ လောကရော၊ သာသနာအတွက်ပါ၊ ထိုထက်ပို၍ နောက်လာလတ္တံသည့် ကာလများ မြန်မာ့ နိုင်ငံအရေးတွင်းမှာ ကြီးမားသော အကျိုးဆက်တခု ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နှစ်ဦး နှစ်ဖက် အဖွဲ့တွေက အင်အားဆိုသော အား တခု အဖြစ် တည်ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်၏။ အား ဆိုသည်မှာ ကိုမိုးသီးဇွန်တို့ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမား အုပ်စုက တဖက် သာသနာ့ ဥသျှောင်အဖွဲ့ တဖက် ဆိုသော အင်အားများဟာ ပဋိပက္ခများဖြင့် ဆက်သွား နေမည်ဆိုလျှင် အနာဂါတ် နိုင်ငံရေး အက်ကြားတွေ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ငါ ဆိုသည့် အတ္တများကို စွဲကိုင်နေလျှင် ကိုယ့်ဖက်က ရန်သူကို မတိုက်ပဲနှင့် အလိုလို ကျရှုံးနေရမည့် ပြသာနာ တခု ဖြစ်သည်။
ထို အား က ပိုနေမြဲ ကြားနေမြဲ ဆက်သွားနေလျှင် အတိုက်အခံအင်အားများ ထိခိုက်ပွန်းပဲ့ အားလျော့သွားမည် ထင်မြင်ကြောင်း၊
အချုပ်ကို ဆိုရလျှင် ဘုန်းကြီးအမှု ရွာပတ်သည် ဆိုဆို၊ ရွာအမှု ဘုန်းကြီးပတ်သည် ပြောပြော နိုင်ငံရေးနှင့် သာသနာက တနည်းတဖုံ သွယ်ဝိုက် ပတ်သက်နေသောကြောင့် တော်လှန်နေသည့် ကာလများတွင် စွပ်စွဲတိုက်ခိုက်သည့် အမှုကို အမှန်တရားတခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရန် နှင့် စစ်မှန်သည့် ထေရ၀ါဒ သာသနာပြုရာ၌ တစုံ တယောက်၏ ပြုမူချက်ဖြင့် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမားများအတွင်း ရှိပြီးသား သိက္ခာများ မကျရန် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးသားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အထက်ပါ စာပိုဒ်များကို စာလုံး အစောင်းဖြင့် ပြုထားသည်က ကာယကံရှင်များ၏ ရေးသားချက် ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်အောင် ပြုထားပါသည်။ မည့်သူ တဦးကိုမှ တိုက်ခိုက်လိုသည့် စိတ်ထား မရှိပါ။ အမှန်တရားတခု ပေါ်ပေါက်ပြီး စည်းကမ်းရှိသော ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်သော လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့်ကို မြန်မာ့အတိုက်အခံ လောကအတွင်း ပေါ်ပေါက်လာရန် ရည်ရွယ်ပြီး အုပ်ချုပ်ခံရမည် ပြည်သူတယောက် အမြင်ဖြင့် ရေးသားထားကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်
Posted by လူလ at Friday, November 07, 20083comments: